Maxaa laga filan karaa WWDC laga bilaabo berri 7th | Waxaan ka socdaa mac
Maxaa laga filan karaa WWDC laga bilaabo berri 7th
Iyada oo ay saacado kooban ka hadhsan yihiin bilowga WWDC ee sanadkan 2021, haddana mar labaad, waxaan falanqeynaynaa waxa wararka ku jira softiweer ee ay shirkaddu soo bandhigi karto. Xitaa waxaa lagu xantaa suurtagalnimada in lagu soo bandhigi karo bulshada taas oo noqon karta 16-inch MacBook pro leh Apple Silicon iyo xitaa iyadoo la adeegsanayo qalabka cusub ee M1X ama xitaa M2. Aan ka gudubno maxaa ilaa hada la sheegay.
1 Nidaamka qalliinka homeOS ee cusub ee WWDC 2021
2 Cusub 16-inch MacBook Pro?
3 IOS 15 iyo iPadOS 15
Nidaamka qalliinka homeOS ee cusub ee WWDC 2021
In kasta oo xantaasi ay muddo kooban jirtay, lagu arkay shaqo bixin, sida Apple ku xustay kuna qortay homeOS. Nidaam cusub oo aad ku shaqeysid qeybta gurigaaga oo diiradda saari lahaa ugu horreyn HomePod iyo Apple TV. Isku-dhafan oo dhowr jeer la isla dhexmarayay bilihii la soo dhaafay. Xitaa waxaa jiray hadal ku saabsan suurtagalnimada in aaladaha la mideeyo midna la furo HomePod oo leh shaashad dijitaal ah suuqa.
Ogeysiiska ayaa si dhakhso ah wax looga beddelay by Apple waxaana jiray hadallo ku saabsan HomePod iyo tvOS markale. Ma garan karno markaa haddii homeOS uu ahaa qalad ku talagal ah oo ay sameeyeen maareeyayaasha qaybtaasi ama haddii ay ahayd wax la doonayay in bambo yar lagu rido WWDC ka hor. Berri waan ogaan doonnaa.
Cusub 16-inch MacBook Pro?
In kasta oo shirka berri bilaabmaya loogu talo galay in lagu horumariyo oo aan caadiyan ahayn in qalab cusub la soo bandhigo, haddana ma noqonayso markii ugu horreysay ee ay sidan dhacdo. Aynu xusuusanno iPad Pro. Taasi waa sababta qaar ay horeyba u filayaan oo u yiraahdaan waa wax ka badan suurtagal in berri 7da iyo WWDC cusub 16-inji MacBook Pro. Sugay sida May biyaha dad badan. Waxaa la sii filayaa inay ahaato kacaan dhab ah, maahan oo keliya gudaha gudihiisa laakiin sidoo kale dib u qaabeynta bannaanka ee laga filayo. Mini-LED, geesaha xagal yar, shaashad badan laakiin isku meel ... iyo dheer iwm.
Gudaha waxaa la filayaa inay gabaad ka dhigato chip M2 cusub ama xitaa waxa dad badani ku tilmaameen M1X. Nooc, wax kasta oo loogu yeero, waa la hagaajiyay marka loo eego nooca M1 oo wuxuu noqonayaa nooca ugu horreeya qaybtan labaad.
IOS 15 iyo iPadOS 15
Wax soo saarka ugu caansan Apple waa macruufka maadaama uu ku socdo wax ka badan bilyan iPhone, waxayna u keentaa kartiyo cusub isticmaaleyaal badan iyo horumariyayaal sanad walba. In kasta oo Apple ay hadda ka hadlayso macruufka iyo iPadOS inay yihiin hay'ado gaar ah, haddana wali way isku mid yihiin oo caqli gal maaha in laga wada hadlo iyaga.
Apple ayaa la sheegay inay ku shaqeyneyso hagaaji ogeysiiska shaashadda qufulka si loo siiyo dadka isticmaala kontorool badan. Sidoo kale xagga maaraynta digniinta siyaabo kala duwan oo ku xidhan hawshaada. Farriinta ayaa lagu xantaa si loo helo astaamo dheeri ah, waxaana laga yaabaa inaan u aragno raadinta cuntada inay qayb ka tahay barnaamijka Fayo-qabka.
On iPadOS, waan awoodnaa dhig widget-yada meelkasta shaashadda guriga, xitaa bedelida dhamaan astaamaha barnaamijka haddii aad rabto. Waxaan noqon doonaa filasho maxaa yeelay waxaan horey u haysannay iPad Pro oo leh M1 gacmaheena waana wax aan rajeyneyno in Apple ay ka faa'iideysan doonto sida ugu macquulsan.
Xanta yar ayaa jirtay ku saabsan nidaamka cusub ee hawlgalka ee Apple u soo bandhigi doonto Apple Watch. Waxaan ka hadleynaa cabirida sonkorta dhiiga, laakiin dib u qaabeynta qalabka ayaa ka macquulsan marka loo eego naqshadeynta barnaamijka. Marka malaha ma arki doonno berri.
Waxaa jiray xogo yar oo ku saabsan waxa uu noqon doono software-ka cusub ee kombiyuutarada shirkadda. Waxa ugu muhiimsan ayaa ciyaaraya mala awaal magacaa noqon doona nidaamka qalliinka, laakiin waxa ay noo keeni doonto ... wax yar in la yiraahdo haba yaraatee. Waxay umuuqataa in Apple markan si dhab ah wax uqaadanayso iyo ma sii deyn doontid wax daad ah.
Ma aqaano haddii wax daadinaya aysan jirin, waa wanaag ama xumaan. Way ku fiicnaan kartaa inay naga yaabi karto laakiin isla markaa way xun tahay, maxaa yeelay waxay macnaheedu noqon kartaa inaysan jiri doonin wax gaar ah oo laga hadlo. Hadday sidaas tahay, waxay noqon doontaa WWDC caajis badan oo haddii MacBook Pro cusub la soo bandhigo, waxaan xoogaa qalloocin doonnaa shirarka horumarineed ee caadiga ah.
Si kastaba ha noqotee, saacado ayaa haray si aan u aragno waxa ay na keenayaan oo aan halkaas joogi doonno, sida had iyo jeer ah, inaan awoodno inaan kuu sheegno wax kasta oo aan kari karno. Ha seegin oo ku raaxayso waxa Apple soo bandhigi doono oo laga yaabo inay noqdaan kii ugu dambeeyay qaab muuqaal ah. Waxaan rajeyneynaa inay sidaas noqon doonto.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Xanta » Maxaa laga filan karaa WWDC laga bilaabo berri 7th